Aniga (oo ah wiil 17 jir ah) waxaan leeyahay saaxiibad.Waxaa ay hadda u tagtey gynecologist, oo ah takhtaradda dumarka.Takhtaradda waxay sheegtay in gabdhaha oo dhami ay halkaasi tagaan.Sidoo kale ma jiraa takhtarka ragga? – Tips for refugees
Aniga (oo ah wiil 17 jir ah) waxaan leeyahay saaxiibad.Waxaa ay hadda u tagtey gynecologist, oo ah takhtaradda dumarka.Takhtaradda waxay sheegtay in gabdhaha oo dhami ay halkaasi tagaan.Sidoo kale ma jiraa takhtarka ragga?
Haa, waxaa jira takhtar noocaas ah.
Takhtarkan waxaa loo yaqaanaa “takhtarka ragga (andrologist)”.
Caadi ahaan waxay sidoo kale isla markaa yihiin takhaatiirta daaweysa hab-dhiska kaadi-mareenka.
Waxaad u arki kartaa takhtarkan waxyaabo badan.
Marka aad qabto su’aalo ku saabsan galmada ama ku saabsan jirkaaga.
Marka wax ku saabsan guskaaga ay u muuqdaan wax yaab leh.
Marka aadan kalsooni isku qabin iyadoo sabab u ah in jirkaaga uu isbeddelayo.
Waxa muhiimka ah:
Waxaad mar kasta tagi kartaa adiga naftaada.
Takhtarka wuu ku baari karaa.
Haddii taasi ay tahay waxa aad rabto.
Waa wax wanaagsan in aad barato jirkaaga.
Habkaasi ayaa ku ogaan kartaa isbeddelada.
Isbeddelada qaar, waa in aad aragto “takhtarka daaweeya hab-dhiska kaadi-mareenka”.
Tusaale ahaan haddii aad ku aragto kuus adag xiniinyahaaga.
Kuuskaasi waa in uu eego takhtar.
Halkan waxaa ku qoran sida aad ku heli kartid takhtar kuu dhow:
Posted on June 19, 2018 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Previous Previous post: Aniga ( oo ah gabar, 16 jir ah) waxaan ku socdaa kursiga curyaamiinta.Weligay ma yeelan wiil saaxiib ila ah.Saaxiibaday kuma socdaan kuraasta curyaamiinta.Dhammaan saaxiibaday waxay soo yeesheen wiilal saaxiibo la ah.Tani miyay sabab u tahay in wiilashu aysan u maleyn in aan qurxoonahay?
Next Next post: Saaxiibteyda ( oo 15 sano jir ah) waxay qaadaneysaa kiniinka ka hortagga uurka.In badan ayaan wada seexanaa.Mararka qaarkood waxay ilowdaa in ay kiniinka qaadato.Uur ma qaadi kartaa?